Ndingaita Sei Kana Ndarwadziswa Neshamwari? | Vechidiki Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Baoule Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Estonian Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Greenlandic Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kachin Kamba Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wokuBrazil Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Nzema Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Quechua (Ayacucho) Quiche Romanian Russian Samoan Sango Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Ndingaita Sei Kana Shamwari Yangu Ikandirwadzisa?
Hapana ushamwari husina zvinetso. Sezvo vanhu vese vachitadza, shamwari yako, kunyange yaunoti ndeyepamwoyo, dzimwe nguva inogona kutaura kana kuita zvinokurwadza. Newewo pane paunombokanganisa. Unoyeuka here mumwe musi wawakamborwadzisa mumwe munhu?—Jakobho 3:2.
Indaneti inogona kuita kuti zvive nyore kuti ugumbuke. Semuenzaniso mumwe mukomana anonzi David akati: “Paunenge uri paindaneti woona mapikicha eshamwari yako ayakatorwa ichitandara nevamwe vanhu, unogona kunetseka kuti nei usina kukokwawo. Unogona kutanga kuona sekuti shamwari yako haikufariri uye unogona kutsamwa.”
Pane zvaunogona kuita kuti ugadzirise dambudziko racho.
Zviongorore. Bhaibheri rinoti: “Usakurumidza kugumbuka, nokuti kugumbuka kunogara pachipfuva chemapenzi.”—Muparidzi 7:9.
“Kazhinji unozoona kuti wakatsamwiswa nezvinhu zvisina basa.”—Alyssa.
Zvekufunga nezvazvo: Unongotsamwiswa nekanhu kese kese here? Unogona here kudzidzira kuregerera vamwe pavanokutadzira?—Muparidzi 7:21, 22.
Ona zvakanakira kuregerera vamwe. Bhaibheri rinoti: ‘Zvakanaka kuti uregerere kudarika.’—Zvirevo 19:11.
“Kunyange kana paine chikonzero chekuti utsamwe, zvakangonaka kuti uregerere, uye izvi zvinoreva kuti haufaniri kuramba uchingoyeuchidza munhu wacho zvaakatadza, uchimuita kuti akumbire ruregerero paunongotaura nezvenyaya yacho. Kana wangoregerera, chirega kumutsa nyaya yacho.”—Mallory.
Zvekufunga nezvazvo: Inyaya hombe here? Unogona kumuregerera here kuti murambe muchiwirirana?—VaKorose 3:13.
Kutaura kese kamunenge matadzirana nguva dzese kwakafanana nekuti kunze kuri kutonhora asi woramba uchivhura dhoo kuti mhepo inotonhora ipinde
Funga nezveshamwari yako. Bhaibheri rinoti: “Musingarambi muchiva nehanya nezvinhu zvamunoda imi pachenyu, asi muchiva nehanya nezvinhu zvinodiwawo nevamwe.”—VaFiripi 2:4.
“Kana iwe neshamwari yako muine rudo uye muchiremekedzana, unogona kukurumidza kugadzirisa zvinenge zvichinetsa nekuti unenge uchikoshesa ushamwari hwenyu. Wakashanda nesimba pakuumba ushamwari hwacho uye haudi kuti hupere.”—Nicole.
Zvekufunga nezvazvo: Unogona here kutsvaga chimwe chinhu chakanaka pamaonero anenge achiita shamwari yako?—VaFiripi 2:3.
Chinhu chinokosha chaunofanira kuziva ndechekuti: Kana ukaziva zvaunofanira kuita kana warwadziswa, zvichazokubatsira kana wakura. Wadii kudzidzira kuva neunyanzvi ihwohwo iye zvino?
“Haisi nyaya yese inofanira kugarirwa pasi. Kana ndichikwanisa kungoregerera pasina kutaura nemunhu wacho, ndinobva ndatoita saizvozvo. Izvozvo zvinogona kuita kuti tirambe tichiwirirana, pane kuda kutaura nezvekanhu kese kandinenge ndatadzirwa.”—Kiana.
“Kana paine chaitika, ndinozvibvunza kuti, ‘Nyaya iyi yakanyanya kukura here zvekuti tingatogura ushamwari?’ Kazhinji kacho panenge pasina nyaya.”—Treigh.
Vakawanda vanoda shamwari dzechokwadi. Ungava sei shamwari yechokwadi kune vamwe? Nyaya ino inotaura mazano 4 anobatsira anowanikwa muBhaibheri.
Mavhesi 5 anogona kukubatsira kuti udzore hasha dzako.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ndingaita Sei Kana Shamwari Yangu Ikandirwadzisa?
ijwyp nyaya 75